Nitrangana korontana mahery vaika tany Soisa noho ny pasipaoro COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Soisa » Nitrangana korontana mahery vaika tany Soisa noho ny pasipaoro COVID-19
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Zon'olombelona • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Vaovao Mafana Soisa • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Nanamafy ny tranon'ny parlemanta ny polisy Bern ary nampiasa tafondro rano, baomba mandatsa-dranomaso ary bala fingotra mba hanaparitahana an-keriny ny vahoaka feno korontana.
Raha jerena ny fiakaran'ny isan'ny trangana virus coronavirus vaovao dia navadiky ny governemanta Suisse ny pasipaoro COVID-19 Mandatory nanomboka ny 13 septambra lasa teo.
Olona marobe no nanao diabe namakivaky an'i Bern, niantsoantso ny “fahalalahana” ary nanenjika ny polisy.
Nampiasa tafondro rano, baomba mandatsa-dranomaso ary bala fingotra ny polisy Bern mba hanaparitahana ny vahoaka feno korontana.
Ny fihetsiketsehana fanoherana ny COVID-19 anio alina dia voararan'ny manampahefana ary nofoanan'ny mpikarakara, saingy mbola betsaka ny olona tonga ary nirohotra namakivaky ny renivohitr'i Suisse, nihiaka “fahalalahana” ary nanenjika ny polisy Bern.
Rehefa nilatsaka ny alina dia namaly ny tompon'andraikitra tamin'ny fandefasana tafondro rano an'ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny pasipaoro COVID-19 notendren'ny governemanta. Misy ihany koa ny rakitsary misy polisy misahana ny rotaka mitifitra baomba mandatsa-dranomaso miely amin'ny media sosialy ihany koa.
Ny sasany tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana dia nanipy zavatra tany amin'ny polisy, sady nitsoka kiririoka no nanao fimamoana.
Lahatsary sy sary taloha kokoa avy amin'i Bern asehoy ny valalabemandry mivory ao amin'ny tobin'ny fitaterana ary mihira hoe “Liberte!” - 'fahalalahana' amin'ny teny frantsay, iray amin'ireo fiteny ampiasaina amin'ny fiteny frantsay Soisa. Io hira io ihany no nampiasaina tany amin'ny faritra manodidina an'i Frantsa hanohitra ny pasipaoro COVID-19.
Taty aoriana dia nidina an-dalambe tao ny Bern mankany amin'ny parlemanta.
Efa mailo hatrany ny polisy nanomboka ny maraina, na izany aza, nanangana sakana fefy manodidina ny Bundeshaus, ny fipetrahan'ny parlemanta Soisa.
Ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny pasiona COVID-19 izay vao nampiharina dia nifandona tamin'ny polisy ivelan'ny tranon'ny parlemanta. Ny talen'ny fiarovana an'i Bern, Reto Nause dia namaritra izany ho fikasana “hamely ny lapa federaly”, ary ny tompon'andraikitra dia namaly tamin'ny fanaparitahana ireo mpanao fihetsiketsehana tamina tafondro rano ary nandrara ny fihetsiketsehana “tsy nahazoana alalana” ho avy.
Mitanisa ny fiakaran'ny isan'ny trangana virus coronavirus, Soisa nesorina ny pasipaoro COVID-19 tsy maintsy natao nanomboka ny 13 septambra lasa teo. Ny porofo dia mampiseho porofon'ny vaksiny, fanarenana na valim-panadinana ratsy vao tsy ela akory izay, ary tokony haseho hiditra amin'ny trano fisakafoanana, fisotroana, gym na toerana malalaka ho an'ny daholobe. Ny fepetra dia kasaina ho tapitra amin'ny Janoary 2022.